MPT- Balloon Star FAQ
၁ မေး ဘောလုံးစတားမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းကဘာပရိုမိုးရှင်းလဲ?
ဖြေ ဘောလုံးစတား၏ ဘောလုံးချစ်သူများအတွက် “နှစ်ဦး” ပရိုမိုရှင်း အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးစတားမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနေသော User များအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
၂ မေး ပရိုမိုးရှင်းဘယ်နေ့ကစမှာလဲ?
ဖြေ ၂၀၁၉ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှ မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ်။
၃ မေး ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် မှာဘယ်သူတွေပါဝင်လို့ ရနိုင်လဲ?
၄ မေး ဝန်ဆောင်မှုဘယ်လိုရယူ နိုင်သလဲ?
ဖြေ ၀န်ဆောင်မှုရယူနိုင်ရန် ဘောလုံးစတားမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးလူကြီးမင်း ၏ MPT ဖုန်းနံပါတ် ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမည်။ MPT ဖုန်းနံပါတ် ထည့်သွင်းပြီးပါကဝန်ဆောင်မှု ရယူရန် နေရာသို့ ရောက်ရှိမှာ ဖြစ်မှာပါတယ်။ ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှု မှာတစ်ရက် ဝန်ဆောင်မှု နှင့် တစ်ပါတ် ဝန်ဆောင်မှု ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာဝန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်ပြီး “ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်” စာသားကိုနှိပ် ပေးရပါမည်။
၀န်ဆောင်မှုယူရာတွင်လူကြီးမင်း၏ MPT ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အတူ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (password) တစ်ခုသတ်မှတ် ပေးရပါမည်။
၅ မေး ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုပါဝင် လို့ ရနိုင်လဲ?
ဖြေ ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှုရယူထားသူ(အသစ်၊အဟောင်း)မည်သူမဆိုပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်တွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်ပါသည်။ဘောလုံးစတားဝန်ဆောင်မှုကို(ဇန်န၀ါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ မတ်လ) တွင်တစ်လလျှင်အနည်းဆုံးငါးကြိမ် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများ ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ် တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ် နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀၉ ၄၅၅၅၀၀၄၄၀, ၀၉ ၄၅၅၅၀၀၈၈၀
၆ မေး ပရိုမိုးရှင်း က ဘာဆုတွေပေးမှာလဲ?
ဖြေ ရွှေ (၁) ကျပ်သား (၃) ဆု ၊ MPT 3000 ကျပ်တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု(၃၀၀) တို့ ကို မဲနှုိက်ပီးရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇ မေး ဆုကိုဘယ်နေ့မဲနှိုက်ပီး ကြေငြာမှာလဲ?
ဖြေ ကံထူးရှင်ကိုလစဉ်ပရိုမိုရှင်းမကုန်ခင်အထိ ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကံထူးရှင်ကို (၁၉.၀၂.၂၀၁၉) ၊ (၁၉.၀၃.၂၀၁၉) ၊ (၁၉.၀၄.၂၀၁၉) တွင်ကြေငြာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
၈ မေး ဆုကိုဘယ်နေ့ပေးမှာလဲ?
ဖြေ ရွှေ (၁) ကျပ်သား ကံထူးသူမှာ ဆုမဲကြေငြာအကြောင်းကြားသည့် ရက် မှ စ၍ တစ်လအတွင်း ကံထူးရှင်ကိုယ်တိုင်မှတ်ပုံတင်မူရင်းဖြင့် MPT ရုံးချုပ်တွင်လာရောက်ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါသည်။
၉ မေး ဆုတွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ပေးမှာလဲ?
ဖြေ ပထမလ ဇန်န၀ါရီလအတွင်းအနည်းဆုံး ၅ ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအား ရွှေ (၁) ကျပ်သား (၁) ဆု နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၁၀၀) တို့ ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယလ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အနည်းဆုံး ၅ ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအား ရွှေ (၁) ကျပ်သား (၁) ဆု နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၁၀၀) တို့ ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလ ကံထူးရှင်များလည်း ပါဝင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တတိယလ မတ်လအတွင်း အနည်းဆုံး၅ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအားရွှေ (၁) ကျပ်သား (၁) ဆု နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၁၀၀) တို့ ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလနှင့် ဒုတိယလ ကံထူးရှင်များလည် ပါဝင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁၀ မေး ဆုမဲကံထူးသူစာရင်းကိုဘယ်လိုသိရမှာလဲ ၊ ဘယ်ကကြေငြာပေးမှာလဲ?
ဖြေ ဆုမဲကံထူးသူစာရင်းများကိုဘောလုံးစတားအက်ပလီကေးရှင်း နှင့် ဘောလုံးစတားဖေ့(စ်)ဘွတ်တို့ မှတဆင့် ကြေငြာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1 Q: What is promotion in BalloneStar Promotion?
A: It is the promotion of BalloneStar’s “Initial Year” Promotion. This is the program for users who use BalloneStar mobile application.
2 Q: When will promotion start?
A: Promotion period is 1st January 2019 to 31stMarch 2019.
3 Q: Who is eligible in promotion program?
A: All users who takeaBalloneStar service (new/old) can include in promotion program.
4 Q: How can I get the service?
A: To takeaservice, users need to open the BalloneStar Mobile Application and type the MPT phone number in application. After adding MPT phone number, arrive the page “To takeaservice”. There are two types of services such as 1 day service and 1 week service. The user can choose as like the service and press the text “To takeaservice”. In choosing the service, users need to assign the MPT phone number andapassword.
5 Q: How to participate in the promotion?
A: All users who takeaBalloneStar service (new/old) can include in promotion program.Users have to successfully pay for the service at least5times for each month (January, February, March). To contact detailed – 09 455500440, 09 455500880
6 Q: What prizes does the promotion give?
A: We will draw (3) Gold 1 Tical and (300) MPT Top Up 3000 Kyats.
7 Q: When day may you announce the prize?
A: The winners will be selected every month till the end of the promotion, on the basis of above mentioned criteria, and announcement will happen on 19.02.2019, 19.03.2019 and 25.04.2019.
8 Q: When day may you give the prize?
A: The winners have to be taken out the winning prize by himself/herself with his/her original NRC Card within one month at MPT head office from the announcement date of getting the prize.
9 Q: How do you choose the prize?
A: The First Month, within the month of January, the users who apply to one day service by making payment at least5days will be rewarded one Gold 1 Tical and hundred number of 3000 Kyats MPT Mobile Top up by selecting with Lucky Draw.
The Second Month, within the month of February, the users who apply to one day service by making payment at least5days will be rewarded one Gold 1 Tical and hundred number of 3000 Kyats MPT Mobile Top up by selecting with Lucky Draw. The participants in first month of lucky draw will be still valid to be accountable in this round.
The Third Month, within the month of March, the users who apply to one day service by making payment at least5days will be rewarded one Gold 1 Tical and hundred number of 3000 Kyats MPT Mobile Top up by selecting with Lucky Draw. The participants in first and second month of lucky draw will be still valid to be accountable in this round.
10 Q: How can we know winners and from where do you announce?
A: We announce the winner from BalloneStar application and BalloneStar Facebook and also phone to winner.